အိမ်ထောင်တစ်ခုတွင် အမျိုးသားများ ပါဝင်နိုင်မှုအခန်းကဏ္ဍ ~ SAI SENG SERK
Home » OTHERKNOWLEDGE » အိမ်ထောင်တစ်ခုတွင် အမျိုးသားများ ပါဝင်နိုင်မှုအခန်းကဏ္ဍ
အိမ်ထောင်တစ်ခုတွင် အမျိုးသားများ ပါဝင်နိုင်မှုအခန်းကဏ္ဍ
အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးဆိုတာ ရုတ်တရက်ကြည့်ရင် မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ ဘက်လိုက်တတ်သူ၊ ထေ့ငေါ့တတ်သူ ၊ အငြင်းပွားတတ်သူတစ်ဦး ရယ်လို့ ထင်ချင်စရာပါပဲ။ တကယ်တမ်း သူတို့ဘ၀ကို အနီးကပ်လေ့လာကြည့်တဲ့ အခါ အိမ်ထောင်မရှိသူ လူပျိုလူလွတ်တို့ အတုယူဖွယ်ရာ စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံတတ်တဲ့ စိတ်ထားတွေကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၁) လေ့ကျင့်ခြင်းဟာ အမျိုးသားတစ်ဦးကို ပြည့်စုံစေနိုင်တာ သိပါ။
လူပိန်းတွေအပေါ် အပြုံးတုတစ်ခုကို အမြဲတမ်း တပ်ဆင်ပေးထားရတဲ့ သင့်အလုပ်ကို သင်မုန်းချင် မုန်းနေနိုင်တယ်။ သင့်ရဲ့ အပြုအမူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း သိပ်ပြီး ဂရုမထားချင်တော့တဲ့ အနေအထားကို ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် သင်မသိသေးတာတစ်ခုက အလုပ်တစ်ခုကို လုံလောက်တဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်တဲ့အခါ သင့်မှာ ဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အတော်လေး ကျွမ်းကျင် သွားလောက်ပါပြီ။ ဒီတော့ အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက် အလုပ်တစ်ခု အမြဲရှိထားဖို့ လိုအပ်တာနဲ့အတူ သည်းခံမှုနဲ့အတူ ကျွမ်းကျင်မှုလည်း ပိုတိုးပွားလာနိုင်တာပေါ့။
(၂) သင့်ရဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ စိတ်ကို နားထောင်ပါ။
သင့်ရဲ့ ဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့စိတ် ၊ အတွင်းစိတ်တို့ကို နားထောင်ကြည့်တဲ့ အလေ့အထ ရှိသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ်တို့က ပုခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကနေပြီး သင့်ကို အာရုံထွေပြားအောင် လုပ်နေတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ အတွင်း စိတ်သန္တာန်ကို အမိအရ နားထောင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ကောင်းတဲ့စိတ်ကို သေနတ်တလက်ကမ်းပေးပြီး မကောင်းစိတ်ကို အသေသာ ပစ်ချခိုင်းလိုက်ပါ။
(၃) သူငယ်ချင်းတွေအတွက် အချိန်ပေးပါ။
အလုပ်ဆိုတာက လာပြီးပြန်သွားမှာပဲလေ။ ဒီတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်အောင် ဖြတ်သန်းပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်တော့မှ သူငယ်ချင်းကို အလုပ် (ဒါမှမဟုတ်) အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကြောင့် တော့ အခင်အမင် မပျက်ပါစေနဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် အချိန်ပေးပါ။
(၄) ဘ၀ကို ပျော်အောင်နေပါ။
အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဆိုလိုတာပါ။ ဘ၀ဆိုတာ တိုတိုလေးပါ။ နောက်တစ်ခဏနေရင် သင်သေခင်သေသွားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး ဘယ်သူကများ ကြိုသိနိုင်မလဲ။ ဒါကြောင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ပါ။ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပေါ့။
(၅) စနောက်တတ်သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါစေ။
ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့ စာအုပ်ကြီးထဲက လူမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ ခံစားချက်ကို သစ်လွင်ဆန်းသစ်ပြီး မိသားစုကို သူငယ်ချင်းများနဲ့ ဆက်ဆံသလိုပဲ ပျော်ရွှင်မြူထူးစွာ ဆက်ဆံပါ။ စနောက်ပါ။ သားသမီးများကို ပွင့်လင်းနွေးထွေးစွာ လိုက်လျောတတ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါစေ။
(၆) သင်ဘယ်သူဆိုတာ အတိအကျသိပါ။
အပြင်ပန်းက စကတ်တစ်ထည် ၊ ဂါဝန်တစ်ထည် ပြောင်းဝတ်လိုက်ရုံနဲ့သင့်စိတ်အခြေအနေ ပြောင်းလဲ သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကက သင်တို့ဘ၀တစ်ခုကို စတင်တည်ထောင်ကတည်းက ရှိထားတဲ့ သင့်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို ထိန်းသိမ်းပါ။ သင့်ရဲ့အတွင်းစိတ် ကိုယ်ကျင့်တရားကို အရှက်ရအောင် မလုပ်မိပါစေနဲ့။ ပြီးတော့ မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့။ သင့်မိသားစုအတွက် သင်ဟာ စံပြခင်ပွန်းကောင်း ၊ ဖခင်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်နေရပါမယ်။
>>> Thank you@<<<
SHAN LOVE POEMS
၀က်ခြံများက ပြောပြသော သင့်ကျန်းမာရေး အကြောင်း
ကလေး နို့တိုက်ရင်း အိပ်မပျော်စေနဲ့
အသုံးမကျတဲ. ဗမာပြည် အစိုးရ ၀န်ကြီး သမ္မတတွေ လို.ပြေ...
Low Back Pain ခါးနာသက်သာစေရန်
ကြွက်တက်ခြင်း (Muscle Cramps) ကာကွယ်နည်း
ခိုင်မာတဲ့ Relationship တစ်ခု၏ လက္ခဏာရပ်များ
ရှမ်းလူမျိုးများ ဗမာပြည် စီးပွားရေး လာရှာတာ ဂုဏ်ယူ...
UWSA အနေနဲ. စစ်ရေးအရ အဆင်သင်.ဖြစ်နေပြီလား
ယောင်္ကျင်္ားလေးတစ်ယောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ...
SHAN STATE ARMY GLODEN JUBILEE PHOTO'S (SSPP/SSA)
ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမှာ ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ အစားအစာများ
ဒူးမှအရွတ်များကို အားဖြည့်သည့် အစားအစာများ
လိင်မှုရေးရာ စွမ်းဆောင်မှုကို ပိုအားကောင်းစေမဲ့ အမျိ...